माधव नेपाल पक्षसँग वारपारको तयारी, के छ ओली एक रहस्य ? — Imandarmedia.com
काठमाडौं। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा शनिबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक बोलाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए।
तामाङका अनुसार केन्द्रीय विभागहरुको पूर्णता, विधान महाधिवेशन तयारी र सदस्यता नवीकरणलगायतका विषय छलफलका एजेन्डा रहेको छन् । असार १९ गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय भएका उक्त विषयमाथि आज छलफल हुन लागेको हो।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभागको पूर्णता दिने र साउन २५ देखि २७ गतेसम्म विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष केपी ओलीलाई राजनीति प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेललाई साङ्गठानिक, उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई विधान र नेता रामबहादुर थापा बादललाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा दिइएको छ।
यस्तै एमालेले पार्टी सदस्यता नवीकरण असार मसान्तसम्म गर्ने र केन्द्रीय कार्यालय अन्तिम नामावली साउन ५ गतेसम्म दिने निर्णय गरेको थियो। योबीचमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षसँग सहमतिको प्रयास हुँदा उक्त काम प्रभावित भएको थियो। आजको बैठकबाट असार १९ गतेको केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन लैजाने तामाङको भनाइ छ।
यस्तै शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित खीर खाने कार्यक्रममा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले माधव नेपालसँगको विवादलाई अब लामो समय नतन्काउने बताएका थिए। पोखरेलका अनुसार शनिबारको बैठकले नेपाल समूहसँग वारपारको नीति लिने तयारीमा छ। अब धेरै प्रतीक्षा गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ, शनिबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकबाट वारपार हुन्, पोखरेलको भनाइ थियो ।
शनिबारको बैठकमा नेपाल पक्षको सहभागिताका लागि ओली पक्षीय नेताहरुले नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। तर आजको बैठकमा पनि नेपाल पक्ष सहभागी हुने परिस्थिति बनिसकेको छैन।
अध्यक्ष ओलीले एकताको प्रयासमा रहेका आफू पक्षीय नेताहरुलाई शनिबारसम्म वारपार गर्ने निर्देशन दिएका थिए । सोही एमाले नेता सुवास नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णु पौडेलले नेता नेपालसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरेका थिए।
प्रचण्ड र देउबाको पेलानले एमालेमा रुवाबासी, ओलीले भने पेल्नु पेले, अब हेर्नुपर्छ
पद र पैसाका लागि लडिरहने हो भने माओवादी पार्टी विघटन गरिदिए हुन्छ : प्रचण्ड
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अबस्था गम्भीर, के हो यथार्थ ?
चिनियाँ जासुसी ड्रोन जपानको आकाशमा, विश्वभर तरङ्ग
पार्टी फुटको पिडा निको नहुदै नेकपा एमालेमा अर्को ठूलो बज्रपात
चुनावमा पत्तासाफ हुने भएपछि नयाँ चाल चाल्दै प्रचण्ड